Himtaa Galmee Junedin Sado Yaakkaa Jijjiramii/Ginbot7 fi OPDOn TPLF hojeete kutaa 9 faa
Jijjiirami/Ginbot7 OPDO/TPLF caalaa saba Oromoon Tufamtee jirti.
Oromiyya fi Finffineen Oduu yakka Minisoota irra dhuffu dhaguu erga jibine turan jira, Minisoota sila abdi Oromoo jeedhamee mora yaakamtoota fi golga Habasha ta’uun isaa Oromoof gadda gudda ta’ee jira. Minisoota Walda Kirstyana fi Musilama, waldalee Dargagota fi baratoota, Miseensoota fi Hayoota OSA heeduun bakka jiran ta’ee utuu jiru. Siyyasii Oromoo kan beeku “Oromoo Xinxala Siyyassa Habasha tokko qoofa” ta’uun Oromoon 20,000 bakka jirutii Mirga Oromoof nami gadii bayee dubatuu tokko dhabamuun Oromiyaa fi Finfinnenti nu salfachisee jira. Uni asi Melese sodane yoo caalifnee Oromoon Minisoota jirtan Nafxanya Moofa Habasha Oromoo harka fi harma muree dhiira hunda sala mure malif nu irraa dhorkuu sodatani Birhanu Nega jala yatan?
Ergama diina qabatani gurmuu qabsoo Uummataa Oromoo kan diigan Jijiiramaa/OPDO xiinoon yaaka kana gadi jiru Melese Zenawi Oromoo irrati rawwatee caalaa Oromoo irrati rawwatan jira:-
1. Safuu, Heera fi Seera Oromoo cabsuudhan Irriibuu galan gananin dhiga fi lafe gootoota Oromoo kan ijaramee gurmuu qabsa’ootaa hayyama miseensoota malee diguu isaatiin;
2. Lammii Oromoo bara baran nagga waliin jirachaa asi ga’ee yerro jalaqabaf gargarii qoodudhan Gosa fi Amantan sosoban of dukka hirirsun kan amoo dimshashumatii yaakkudhan salphsuu fi xiqeesun Oromoon akka wal baqatuu waan goodhanf;
3. Gurmuu Qabsa’ootaa digan ji’a murasee keessati, Malaqa Qootate bila Oromootiin Meesha lola bitamee harka isaan galee fi qabsa’oota Oromoo ummurii gutuu dirre turan akka isaan TPLFti harak ladhatan goochuu isaniin;
4. Qabsa’oota ijoolee Oromoo dirre Kibba jira kun Wellaga Shawa isaan baduu qabuu jeechun haalkani wal damasan, gosan wal gurmeesan ijoolee Oromoo hafan bosoona keesa ilee akka hin jirane goochuun lubu heedu balessu isaan,
5. Icitii yerro dheerraa harka qaban fayadaman qabsa’oota Oromoo biyya keessa jiran namoota beekamoo, Baratoota Oromoo fi miseensoota WFDO fi OBK qanammitii tokko ilee utuu isaani waliin hin qabatiin akka waan beekanti odeefanoo soba diinaf lachuun hidhatii gursisuu isaaniin;
6. Qabsa’ootaa badii tokko ilee hin dalagiin fi dalaguu ilee hin dandeenye Harka qulaa jira Oromoo qaqalii 17 gara jabina fixuu isaanini;
7. Saboontoota Oromoo biyya ala jiran maqa fi teesoo isaan dhaabbilee Habasha diina Oromoo ta’aanf lachuun lola fi Olola irrati basisun Oromoo birrati akka fudhatama dhaban goochuu isaani;
8. Waggota Laman darban ijoolee Oromoo qabsaoo haqaf mana ba’aan yakka jijjiramii hojeetuu irrati damaqan akka Qananisa Waabee, Bilaali fi Yonatan Dhibisaa kkf bakka butee dhabamsisuu isaaniin;
9. Kenya Keessa Baqatoota Oromoo heedu maqa fi tessoo isaan diina keenun harka diinati kufisan du’aaf saxiluu isaaniin;
10. Akkuma lamii Oromoo tokkoti icitti duran beekan qabsa’oota Oromoo lubu hambsuuf of qusanoo qabachuu utuu qaban Diina akkas jeedhan gorsuu irra darbani “ Because the army and state institutions will remain intact, secessionists will not be able to break away any part of the country and have to wait for the due process.” Iccitii isaan harka ga’ee TPLF fi Ginbot 7 dabarsan keenuu isaaniin;
11. Of isaanif gurmuu qabsa’oota diiguu utuu isaanti hin xinnatiin gaafi fi Mirga hirree murteefana ummataa Oromoo “secessionism” jeedhani. Second, in a situation where there are competing nationalist narratives, such declaration is likely to stir up anger on the other side—weakening the moderates and strengthening the ultra-nationalists. biyya murmutoota jeechun media diinati affan horman saxiluu isaanf.
12. Amalee yaakaa hojeetanf ykn warii keessa banee jeedhan ilee dogogora humamee irraa gaban qula Oromoo dhoksuu mana kara bakka bu’aa isaan Jawar Mohamad akkuma kana duraa Ginbot 7 gorsa fi icitii dabarsaf jirachuu isaaniin;
13. Ogganii, Miseensoon fi jarsoolin gossan garsuu Oromoo digge kana dukka hiriraan yaaka dalagama jiru kan haqan yeroon dura kan dhabata murasa, kan erga isan labsan uummatii biyya hunda dura dhabachuu igalee booda ibsa muran fi haqa hin tanee basuu egaluun bu’aa hin qabuu. Kana Malee Miseensoon 95% fi GS 65% kun uni Oggana jeedhan Miseensoota 5% fi GS 35% dura dhabachuu maliif dadhaba? Yoo dadhaban ilee Mediati ba’aan Uumataa Oromooti malif hin labsiin? Yakka Oromoo irrati goodhamuu hanga ini labsamuuti ma caalisan? Kayoo irrbuu galalanf bakkuma tokkotii ilee du’aa irraa hambsuu hin dandeenye maliif waraa qabsa’uu dura dhabatuu yerro hunda.
Lichoo Bukura” jarii kun soban shanee diigan, nu waliin biyya galuuf ka’aan boode qanfatan haafni uumata soban, amalee hundi isaani mariatni Ginbot 7 galuun labsamee akkuma shanee soban ergasi amoo uni soban ama ilee jari lachuu wali isaani soba jiru” jeedha kunoo amantana. Lichoo Bukura.
Waluma Galatii Gosa, Amanta fi Fayyidaa irraa ofii isaani utuu bilisa hin goodhiin Oromoon bilisoomsuuf deema jeedhe odeesun of gooyomsuudha malee Oromoo kana boodee goyomsun hin danda’amuu. Uummanii fi Miseensoon balan iccitii Ogganoota hin beekne yerro gara gurmuu bilisummaa uummataa Oromoof loluu dukka hiriruun gaafi , haawwi fi dheebuu bilisummaa uumanii Oromoo qabuu bakkan ga’uu qabdu jeechaa. Ogannoon Jijjiramaa kan turan keessa ba’aan fi amalee gorsituu Ginbot 7 goodhan kan of mudan jiran yakka bara baran ittigaftamuuf deemtan irraa of qusadha jeena.